General Comments | Outboard Boat Motor Mmezi
Nke a bụ ebe ị nwere ike ịhapụ ihe gbasara saịtị a, ụgbọ mmiri, motọ, ịkụ azụ, na isiokwu ndị ọzọ, ma ọ bụ naanị na-ekwu okwu ọma ma gwa anyị ebe ị si. Biko, enweghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, njakịrị, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-ekwesịghị ekwesị maka saịtị a. Ị ga-emerịrị ya Banye ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị ịhapụ ihe.
osụk site jwb.jw17 na òtù ezinụlọ, 06 / 28 / 2017 - 15: 41
Achọrọ enyemaka site n'aka ndị ọkachamara. Anọ m na - aga ịnweta ígwè ọrụ ochie a, achọtara m ihe ole na ole site na akwụkwọ ntuziaka 52-54 evinrude ochie mana ọ dịghị ekwu ihe ọ bụla banyere ihe na - eme na nke a .Ọ bụrụ na ọ na - agbaba ya na mgbọm mmiri wee debe ya na - Achọpụtara m na obere ikuku gas esiwo n'otu obere oghere dị n'okpuru ebe a na-egbuke egbuke dịka ihe dị n'elu mmiri na ikpochapu. O kwesŽrŽ Žp ta ebe a? Na-agba ọsọ mpempe akwụkwọ ahụ tupu emechie ya (dịka ọ bụla akwụkwọ ntuziaka ọ bụla) gbochie nke a? M bụ newbie na engine a ma chọọ enyemaka ... Ma m na-agbalị ịchọta a free ntuziaka download ... ekele j bert
osụk site ttravis na òtù ezinụlọ, 06 / 28 / 2017 - 22: 04
Na zaghachi 61 / 62 Johnson 3hp leaks by jwb.jw17
t ada ka mmiri bụ ...
Ọ na-ada ka mmiri na-na-n'ime gị ala unit mmanụ site a na-eri eri mmanụ akara. Ọ dịghị gas n'okpuru powerhead, ma mmiri / mmanụ na-eri eri azụ si eleghị anya dị ka gas. Ndị a bụ roba akàrà na-aga gburugburu driveshaft. Ọ bụ ọsọ na replac...Lee More
osụk site ttravis na òtù ezinụlọ, 06 / 28 / 2017 - 22: 09
Ebe a bụ ndepụta nke akụkụ m ...
Ebe a bụ ndepụta nke akụkụ m na-etinye ọnụ gị JW-17, gụnyere driveshaft mmanụ akara. http://outboard-boat-motor-repair.com/motors/Johnson%203.0%20HP%201961-…
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 00: 21
Ekele gị tvisvis. Ekwenyesiri m ike na ọ bụ gas nwere otu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ m na mmanụ na gas nwere, ọ na-ewepu ngwa ngwa na-ahapụ mmanụ na-acha anụnụ anụnụ 2. Enweghị m ike ịgụta ihe niile ị na - eme maka ihe ụfọdụ a na - amaghị ama .Ị nwere ike idetuo na mado ya na e-mail. Anọ m jeremy.w.bert@gmail.com . Na m naara anya ala shroud iji hụ ma m pụrụ ịchọta isi iyi mgbe m chọpụtara na ọ na-abịa si na obere oghere stbd n'akụkụ dị n'okpuru ebe aro ejikọ prop mgbakọ. Ọ na-ada na mberede na-egosipụta onwe ya. Ọ bụla ọzọ echiche? Ọ fọrọ nke nta yiri ka ya dị ka nile ihe. M nwere ma valvụ na iweso mechie ... Ọ mere ihe a ugboro abụọ ... Yiri na-agba ọsọ ezi ??? nkeanks maka comeback ...
osụk site ttravis on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 09: 07
Odochaghị m anya. Ọ nwere ike ịbụ ...
Odochaghị m anya. Ọ nwere ike ịkụda ihe nkedo site na powerhead. I nwere ike iwepu ike iji hụ ma ọ bụ ebe ahụ ka ọ si malite. Ọ bụrụ na ịchọrọ nọmba ọgụgụ, mee ka m mara, m ga-anwa ịchọta ya maka gị. Enwere m ike ịbanye n'akụkụ maka engines niile, mana nrịịcha na akàrà ga-abịa mgbe e mesịrị nụchara akụkụ. Echere m na nnukwu ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị bụ otú ọ ga-esi na-eri nri ma ọ bụ ihe kwesịrị ichegbu onwe ya. Echeghị m na ọ na-afụ ụfụ ihe ọ bụla iji nwee ntakịrị ụrọ. I nwere ike ịjụ ndị mmadụ na iboats.com na ebe ị nwere ike inweta azịza ka mma.
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 12: 07
Ekele ttravis, na-eri eri ezu iche banyere USCG
Achọpụtara m na ụtụtụ a ka gas na-agbapụ. ọ bụghị ihe dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị ga-etinye mmanụ dị na mmiri! Anyị ga-ebu ụgbọ mmiri na Mission Bay, SanDiego ịga ileta umu ụmụ na ha dị nnọọ mkpụrụ n'ebe ahụ banyere mmetọ ọ bụla. Onye na-akọrọ gị maka nsị na-egbu egbu iji gbochie ndanda si na RV gị ebe ahụ n'ihi na akpụkpọ anụ ochie (apịtị apịtị) nwere ike iri nri !!! Mgbe ị na - ekwu "isi ike" m na - ewere ya na, ị na - ekwu mgbakọ dum / gas tank na mgbanye mgbakọ? O yiri m ka m ga-aga. Ana m amalite iche na gas na-emechi valvụ na-eri nri. Ebe ọ bụ na windo mechie, ọ na-ewe oge maka mkpali nke gas na-esi na mmiri na-eme ka ikuku mmiri zuru. Ọ bụ ya mere ọ na-eme ọ bụla 24 awa maọbụ ya. Ahụghị m ebe ọ bụla n'èzí carb nke dị nro. Ụgbọ mmiri ahụ ọ na-asọba n'olulu ahụ? O nwere ike ịbụ na ọ bụghị nanị na valvụ ahụ mechiri emeghe ma valvụ nke vent na valvụ a na-awụlị na ọkwá mmiri. Dirt. M ga-ewughachi mpeepe a ma m ga-edochi akara ahụ ị gwara m. Enwetụbeghị m ọrụ na engine engine, ma ọ bụ ọrịa strok 2, ma enwere m ọtụtụ carb na-aga nke ọma .. A ga-enwe ekele maka ndụmọdụ ọ bụla .. ekelela gị Travis! J Bert
osụk site ttravis on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 17: 46
Na zaghachi Ekele ttravis, na-eri eri ezu iche banyere USCG by jwb.jw17
The powerhead pụtara mfe ...
Ikeheadhead dị mfe ịnwepụ. Emere m nke a na ọrụ ntinye m nke Johnson 5.5 HP nke ị nwere ike ịgụ banyere ebe a: http://outboard-boat-motor-repair.com/Johnson/Remove%20Lower%20Unit%20a…
Enwere m mpempe akwụkwọ na 3 HP Evinrude nke bụ otu ihe dịka ihe ị nwere. Ị nwere ike ịgụ banyere ebe a: http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou…
M ga na-atụ aro na-agụ abụọ n'ihi na carb na ignitions bụ otú yiri.
Nwee obi ụtọ na California na ndị akwakids. Aga m na Wisconsin na ọdọ mmiri Michigan. Enwere m njikọ maka ebe ahụ nakwa: https://www.youtube.com/watch?v=xC7QiRaJTbI&t=55s
Achọrọ m valve shutoff ọhụrụ maka 3 HP Evinrude. Mgbe m chọtara otu, m ga-eme ka ị mara.
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 22: 45
Na zaghachi The powerhead pụtara mfe ... by ttravis
Daalụ. Eche m na m ga-ebu ụzọ buru ibu ma wee nyocha maka nkwụsị. Mgbe ahụ mechie isi ike,
Gas na-eri eri si a onu
osụk site ttravis on Nọdụ, 07 / 01 / 2017 - 02: 37
Na zaghachi Powerhead na carb by jwb.jw17
E nweghị mgbanwe mkpanaka na ...
E nweghị mgbanwe mkpanaka na 3 HP ka e on 5.5 na ndị ọzọ na ụdị na-ịgbanwee.
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 22: 57
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 23: 00
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 23: 08
M n'ezie na-ekele gị na-ewere oge iji nyere m dị ka nke a ... m hụrụ n'anya na nke a obere engine ya naanị 10 afọ tọrọ m ka m na dabara m 14 ụkwụ osisi nwayọọ ụgbọ mmiri zuru okè .I'll-ị posted na m na-enwe ọganihu ... m nwere ọtụtụ ihe na burner ugbu a. Jeremy
osụk site jwb.jw17 on Fraị, 06 / 30 / 2017 - 21: 24
Gas tank na valvụ
Ka m na-eche na emechibido ihe mgbochi valvụ, m wepụrụ tank na-agbanye valvụ ahụ ma jụọ ya na mpi iji kpochapụ ya. M na - ahapụ ya ka ọ na - anọdụ ala ma na - agbanye ya ma jiri windo mechibido ya ka ọ dị obere. N'ụzọ dị ịtụnanya naanị ntakịrị nchara nchara na nsị wee pụta na akụkụ abụọ nke nchekwa nchekwa ahụ .Ọ ghaghị ịmepụta ya ogologo oge gara aga ma nke a bụ ma eleghị anya ihe kpatara na windo ahụghị akara.
Nchekwa gas gas
osụk site jwb.jw17 on Fraị, 06 / 30 / 2017 - 21: 58
Na 5.5 HP ị nwere njikọ iji wepụ. Anaghị m ahụ ihe ọ bụla na nke a ma enwere naanị skaa 5. Enwere obere efere dị n'elu ọnụ mmiri nke m na-ewepụbeghị.
osụk site jwb.jw17 on Fraị, 06 / 30 / 2017 - 22: 01
Ike isi ọzọ n'akụkụ
Nyocha 2 n'akụkụ ọ bụla na otu na njedebe
osụk site ttravis on Nọdụ, 07 / 01 / 2017 - 02: 39
Na zaghachi Ike isi ọzọ n'akụkụ by jwb.jw17
M ga-dọwara ma intall ...
M ga-adọkapụ ma tinye ihe ntanye ọgbara ọhụrụ. Enwetara m na Tractor Supply. Enwere m ike iziga gị njikọ echi ma m mụrụ anya. Zọpụta ndị agadi wires iji tụọ ogologo ha.
osụk site ttravis on Nọdụ, 07 / 01 / 2017 - 06: 57
Na zaghachi M ga-dọwara ma intall ... by ttravis
http://outboard-boat-motor-repair.com/parts/18-5225%20Spark%20Plug%20Wi… ma ọ bụ na-eji saịtị search na nkwụnye na "18-5225"
osụk site jwb.jw17 on Nọdụ, 07 / 01 / 2017 - 13: 37
Kwenye m n'echiche. Aga m aga n'ihu na iwepu isi isi ma weezie ihe ... M ga-eleghachite azụ ma ọ bụrụ na achọrọ m enyemaka ..thanks ọzọ!
osụk site jwb.jw17 on Fraị, 06 / 30 / 2017 - 22: 16
Icheku ọkụ nkwụnye wires
Lelee nke a !! onye n'emebe nke a (chafing gear) na nkedo ikuku na otu nchikota nchikota na onye maara ihe ọzọ, mgbe ọ na-agafe ngwa ngwa, a na-ehichapụ wires na ọkara n'ihi na ihe dị otú a bụ nnukwu nnukwu bọlbụ. mgbe ahụ, o gwo ya ka ọ na-agagharị. Kedu ihe ị ga-eme ? Achọrọ m iwepụ ya ma jiri ihe ka mma.
Kwụsị ọnọdụ n
osụk site jwb.jw17 on Fraị, 06 / 30 / 2017 - 22: 18
osụk site jwb.jw17 on Fraị, 06 / 30 / 2017 - 22: 20
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 07 / 06 / 2017 - 14: 43
Nke a 3 / 4 inch ntụpọ bụ n'okpuru ihe nile. Down na-acha ọcha na-ọla kọpa
Wepụrụ junk ...
osụk site jwb.jw17 on Tọs, 07 / 06 / 2017 - 14: 48
Mkpụrụ elu 60lbs dị elu, ala bụ 50. ga-akwatu isi ma chọpụta / dochie gasket na resurface ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Enwere ihe mgbaaka maka engine a?
osụk site jwb.jw17 on Fraị, 08 / 04 / 2017 - 10: 40
Na zaghachi mkpakọ ule by jwb.jw17
JW 17 oru ngo
Hello Travis, emesiri m nwee oge iji rụọ ọrụ na nke a .. M wughachiri ihe nkedo ala ... O were m 3 awa iji gwupụta akara ochie ahụ! Amalitere m ịkwa ụta maka iwepụ ya ebe ọ bụ na mmiri enweghị mmanụ. Ka o sina dị, akara ọhụrụ na ọhụụ ọhụrụ dị. Ọ dị m mkpa ijiri akịkọrị nke permatex mechie isi ike n'isi? Na isi iyi, OK ka permatex nke a kwa? Enwetụbeghị m ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọrịa 2 ka m wee jụọ mbụ. Daalụ
osụk site ttravis on Fraị, 08 / 04 / 2017 - 11: 56
Na zaghachi JW 17 oru ngo by jwb.jw17
Mee ka ị na-ewepụ onwe gị! Ị ...
Mee ka ị na-ewepụ onwe gị! Ịkwesighi ya iji mechie powerhead ahụ, ma ọ bụ isi mkpuchi isi.
Obi ụtọ ịnụ na ị na-enwe ọganihu. Ị ga - abụ ọkachamara mgbe emechara gị.
osụk site jwb.jw17 on Nọdụ, 08 / 05 / 2017 - 10: 50
Na zaghachi Mee ka ị na-ewepụ onwe gị! Ị ... by ttravis
Biko ekele, aga m eme ezigbo ọrụ dị ọcha n'ahụ ha. Ngwa ngwa m ga-anọ ebe a n'oge na-adịghị anya .. M na-eche na akara ahụ bụ ihe mbụ, ọ bụ ọla acha, ma kwadoo ya n'ụzọ nkịtị mgbe afọ 55 gasịrị! M ga - eji 50 na 60 na - enwe nsogbu ugbu a ma nwee olileanya na ọ ga - adị mma mgbe m ga - ebuteghachi ya .Ọkpụkpụ isi, ọ bụ ezie na ọ dịbeghị njikere maka mgbanwe ma ana m enwe olileanya na Ngwọta Mystery Oil na - . Enwere M 31 Model A Pickup nke nwere isi gbawara agbawa, mmiri ahụ kwụsịrị 4 pistons niile. M wepụrụ isi ma jupụta cylinders na MMO. Mgbe m werk, ejiri m aka na-ebugharị ma weghaara m 8 sound sound ma malite na-agbalị ịkụnye crank gburugburu ma nweta ihe na-akpụ akpụ. N'ụbọchị mbụ, ọ na - eme njem dị ka sentimita ole na ole na ụbọchị ọ bụla ọzọ na - emesị gbanwee kpamkpam .Mgbe 3 ọnwa ole na ole ka e mesịrị, enwere m ike ịmịpụ ya ma pịa isi ọzọ na ya, kpoo ya ma malite ya ozugbo !!! Ihe ijuanya na agba aka na ngwangwa nke Model A na MMO. Daalụ Tom, Aga m eme ka ị mara otú ọ si apụta.
osụk site jwb.jw17 on Nọdụ, 08 / 05 / 2017 - 22: 36
Na zaghachi ekele by jwb.jw17
Na-aga JW17 oru ngo
Hi Tom, N'ehihie a gbasara 5 n'ikpeazụ rutere ụlọ ahịa m iji rụọ ọrụ. Ngwunye carb dị na mail. Na valvụ a na-awụ na-acha efegharị na-enweghị ihe ọ bụla na nkedo ígwè kama ọ bụ rọba .. M nwere oge ọ na-ewepụta ihe na-arụ ọrụ na n'ikpeazụ mechie ya ntakịrị ma nweta ya. Echere m na ebumnuche ya bụ iji hụ na agịla ahụ ga-agbadata ya. Valvụ mbụ ahụ enweghị uzo n'elu ... Ya mere, onye na-enwu ọkụ na carb na-aga n'ihu, a na-arụkwa ya n'isi, na isi ike dị azụ. Akwụkwọ ntuziaka Evinrude na saịtị gị na-ekwu ka itinye engine ya n'akụkụ iji jupụta ngwa ngwa. M mere ... Ajụjụ ... ?? Ekwesịrị m idozi ya ozugbo ma wepụ plọg n'elu iji weta ọkwa dị n'olulu ahụ ma ọ bụ ka ọ ga-adị mma dị ka ọ dị? Ejiri m ya ka m wee jupụta n'ọkwá ahụ .Ma enwere m wiwi nkwụnye iji mesoo ya. Okwesiri m ime nyocha ọzọ nke valvụ gas tupu ịwụnye tank na valvụ ... Achọpụtara m ntakịrị egbe n'ime valvụ ahụ ma nwee olileanya na ọ ga-emechi akara ugbu a.
osụk site ttravis Na Sun, 08 / 06 / 2017 - 12: 22
Na zaghachi Na-aga JW17 oru ngo by jwb.jw17
AS rue ala ọgwụgwụ mmanụ ...
MGBE mmanụ njedebe nke mmanụ na-aga, m na-etinye mmanụ na nkwụnye n'elu, ya na moto ahụ na nkwụsị ya ruo mgbe ọ malitere ịpụta.
O yiri ka m hụrụ mmanụ ọkụ na-emechi valvụ na eBay, ma anaghị m arụ ọrụ na 3 HP n'oge na-adịghị anya. Echere m na nke a bụ naanị ihe mgbakwunye 1 / 4 ọla kọpa ọla kọpa ma ọ bụ ọla kọpa ọla. Emere m ihe ndị na-esonụ Amazon ga-ahụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe ga-arụ ọrụ.
osụk site jwb.jw17 on Tus, 08 / 08 / 2017 - 10: 42
Na zaghachi AS rue ala ọgwụgwụ mmanụ ... by ttravis
Ee achọtara m otu ebay. $ 55 !!!! Ndị mgbasa ozi e dere na Russian otú ahụ ka m na-agụ ya ma anaghị m achọ ịkwụ ụgwọ 55. Mmanụ na-agbaju iji mejupụta onu. Aga m aga obodo a taa maka ụlọ ahịa ihe onwunwe nke nwere ihe niile m chọrọ ... Nke a nwere ike ịbụ otu oge ha anaghị eme.
osụk site PatsRG8. on Tọs, 08 / 03 / 2017 - 10: 30
1956 Johnson tank akakabarede
Ezi ụtụtụ- M ka dị nnọọ ka ị rụchara ọrụ ntọghata tank ahụ na 1956 5.5hp. Ana m agba ọsọ na nsogbu na akara ọkụ / eriri ọkụ. Ị nwere ike ịgwa m ihe dị mma ị na-eji, ọ dị m mkpa ịzụta ya site na ogwe aka na-egbu egbu na nchara m nwere ka ọ dị oke.
osụk site ttravis on Tọs, 08 / 03 / 2017 - 11: 22
Na zaghachi 1956 Johnson tank akakabarede by PatsRG8.
The mmanụ akara na-eji ...
Osisi mmanụ ụgbọala Johnson / Evinrude na-eji ma ọ bụ 3 / 8 ma ọ bụ 5 / 16 nke anụ ọhịa n'ime ọnụọgụ (ID). Ọ bụ naanị ụdị mmanụ ị nwere ike ịnweta n'ụlọ ahịa ọ bụla.
Nke a bụ njikọ ebe ị nwere ike nweta 5 / 16 ID 5 ụkwụ akara na Amazon.com
Nke a bụ njikọ maka akara 1 / 4 nke anụ ọhịa ID 5:
osụk site PatsRG8. on Tọs, 08 / 03 / 2017 - 12: 02
Na zaghachi The mmanụ akara na-eji ... by ttravis
mmanụ ụgbọala akara
Daalụ. Azụrụ m 1 / 4 ma enweghi m ike ịmalite ya site na ụlọ dị ala ebe usoro usoro abụọ ahụ dị. O yiri ka akara i ji mee ihe na saịtị ahụ dị oke otú ị si arịgoo ogwe aka ahụ?
osụk site PatsRG8. on Tọs, 08 / 03 / 2017 - 12: 06
Na zaghachi mmanụ ụgbọala akara by PatsRG8.
Bottom nke cowling
N'ala nke egwu.
osụk site ttravis on Tọs, 08 / 03 / 2017 - 22: 14
Na zaghachi Bottom nke cowling by PatsRG8.
mmanụ ụgbọala njikọ
Na m oru ngo, M dochie anya abụọ akara mmanụ njikọ ya na otu eriri mmanụ njikọ na mkpuchi ụgbọala. Anaghị m agbanye mmanụ ọkụ ma ọ bụ n'okpuru ala mkpuchi moto.
Achọghị m nke a na Amazon.com, Otú ọ dị, ha nwere ụfọdụ na eBay. Chọọ maka
"393334 njikọ mmanụ"
osụk site Newt6522 Na Sun, 08 / 13 / 2017 - 17: 19
Naghị enweta gas
Enwere m 1956 qd-17 10 ịnyịnya agha anaghị enweta mmanụ. Enwere m ihe ọkụkụ ma ana m enyefe ya na bọlbụ na-edozi ahụ ma ọ bụ ya mere m ji dọpụta carb ahụ ma jets dị ọcha. aro ọ bụla
osụk site ttravis na Solomon, 08 / 14 / 2017 - 00: 24
Daalụ maka nleta. Ị ...
Daalụ maka nleta. I nwere ezigbo ajụjụ.
Mee ka mpempe akwa ahụ, tinye aka gị ma ọ bụ nkwụ na-eri nri ma wepụ eriri ụda. I kwesiri inwe mmetuta na oge ahu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, lelee valves reed. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta mmịnye na manafold, jide n'aka na ikuku carb bụ ikuku. Okwukwu nta dị ka ntụtụ prick na ahịhịa. Ọ ga - eme ka carb ghara ịdọrọ mmanụ na ikuku. Jide n'aka na i nwere ihe ohuru Carb Kit mgbe ị tinyere carb azụ. O nwekwara ike ịchọ ịchọpụta valvụ awara mmiri.
osụk site Timreimens na Solomon, 08 / 14 / 2017 - 22: 46
Daalụ Tom maka ihe ukwu niile dị na rehabbing a 3hp outboard. Azụtara m ụgbọ ala mbụ m, bụ 1964 Evinrude 3hp Yachtwin maka $ 60 nke chọrọ nkwụsị nke ọma. Ọfụma na a na-elekọta carburetor, ma ọ dị mkpa ka ọ dị ọtụtụ nlebara anya ọzọ. Isi ihe na condenser dị mma kama ọkpụkpụ ahụ dị njọ dị ka wired nkwụnye. Ihe mkpuchi isi isi nke cylinder nwere mgbatị wee banye na jaket mmiri na efere na-ekpochapu ihe nwere ọtụtụ oghere, ma ihe nkedo ahụ dị mma. Enwere m ihe mgbochi ma wughachi carburetor ahụ ma ọ gbapụrụ na ọ na-agba ezigbo mma. Naanị ugbu a ka m nyere iwu ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ na ihe mkpuchi na-ekpochapu na efere. Enweghị m ike ichere ịpụ ma gbanye ya na mmiri.
Achọrọ m ịgafe abụọ Youtube njikọ na achọtakwara m aka.
(John Bright's) Johnson & Evinrude Carb mmezi 3hp 50s & 60s https://www.youtube.com/watch?v=B2bvvnotA1k
(cajuncookone) Evinrude Gale na Johnson agbaghara video https://www.youtube.com/watch?v=oTN8Ag_aj-8 (ogologo oge 7-10 nkeji ma nke ọma)
Tim na Maine
osụk site Ọdụm na Solomon, 08 / 21 / 2017 - 22: 04
Echeghị m na e nwere ihe ọ bụla nwere ike imekọrịta n'etiti abụọ. Ọ bụrụ na 1941 Johnson 3.3 HP na-agba ọsọ, dochie mmanụ ọkụ na ịnweta ya. Ọ ga-esi ike ịchọta akụkụ maka ụgbọala ochie ahụ. Evinrude anaghị akwado ya ọzọ, Sierra Marine adịghịkwa eme akụkụ maka motọ nke ochie. E nwere ebe a na-emepụta vinefous na google ebe ị nwere ike ịchọta akụkụ. Ha mere moto ahụ ruo ọtụtụ afọ.
1958 Johnson 3.0 HP JW-14 bụ onye na-ewu ewu. Enwere otutu akụkụ dị. Nke a bụ njikọ nke depụtara akụkụ ndị nkịtị.
M ga-ekwu na ọ dị mma ịkwalị imezi ma na-agba ọsọ.
Enwere m 1941 evinrude 3.3hp na 58 'johnson 3hp.
Enwere akụkụ ọ bụla na-arụkọ ọrụ ma ọ bụ mgbanwe?
The 3.3 hp na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na eriri mmanụ ọkụ ma na 3hp adịghị ada ma ọ bụ na-agba ọsọ.
osụk site Ọdụm on Fraị, 08 / 25 / 2017 - 10: 35
Na zaghachi Evrinrude 3.3hp 1941 by Ọdụm
Aga m eme ka ị mara ihe merenụ ma ọ nwere ike ịbụ oge.
osụk site cliffjohnsen on Fraị, 08 / 25 / 2017 - 17: 04
Enwere m onye ọkụ azụ 5.5 ...
Enwere m onye ọkụ azụ 5.5 1956. ọhụụ ọhụrụ ma mee ka ihe niile dị mma. Ihe ndị a na-adabere ma meghere ma ọ bụ mechie. Echere m na nke a bụ eziokwu. Site na wiwi na condensor wire, ha na-adịghị tọrọ
Ihe ọ bụla atụ aro? ihe abụọ ahụ na-anwale 8ko na plọg site na waya. Ọkụ na-egbu oge.
osụk site ttravis on Nọdụ, 08 / 26 / 2017 - 01: 01
Na zaghachi Enwere m onye ọkụ azụ 5.5 ... by cliffjohnsen
Kedu ihe na-eme nkwụsi ike ...
Kedu ihe ị na-agwụ ike ị ga-esi gafere ndị condensers? O kwesịrị ịdị elu. Ụfọdụ foto ga-enyere aka.
osụk site Xavier56 na òtù ezinụlọ, 08 / 30 / 2017 - 16: 56
Johnson 5.5 Hp CD-20 - Enweghị Ọkụ
Enwere m Johnson 5.5 Hp CD-20 na Enweghị Ọkụ. Na azụ azụ m nwetara moto a ka ọ ghara ịgba ọsọ, onye ọzọ amalitekwara idozi ya. Ha na-arụ ọrụ New New Coils, Condensers and Points. Enweghị ike ịmara ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ, wires na-ele anya. Enweghi uda o bula, obunaghi ihe na-adighi ike ma oburu na ijiri plọg aka na ikpe. Enwere m ya niile ma enweghi ike ịchọta nsogbu ọ bụla. Agụla m 1954-1964 Evinrude 5.5 HP Tune-UP Project Iune-Up. Lere anya na foto ma gbalịa ịhụ ma ọ bụrụ na arụnyere ihe na-ezighị ezi. Akuku echekwara na Ok. Enweghị m ike ịhụ ihe m na-efu. Were foto ma jiri ya tụnyere foto Tune, anaghị ahụ ihe dị iche. Enwere m ike ịhụ onye na-enweghị ọkụ ma ọ bụghị ma. A ga-anabata enyemaka ọ bụla.
osụk site ttravis na Solomon, 09 / 04 / 2017 - 12: 17
Na zaghachi Johnson 5.5 Hp CD-20 - Enweghị Ọkụ by Xavier56
Aga m ewere ohm mita ...
M ga-ewere otu mita ohm ma nwalee ndị condensers na akpụkpọ ụkwụ. Nakwa, lelee ntanye ntanye iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu nke ala ma ọ bụ njikọta.
osụk site VintageRuns na Solomon, 09 / 04 / 2017 - 09: 59
Ekele m: M zụtara 1965 3hp Johnson ozugbo ma enwere m nsogbu itinyeghachi mmiri tube. E nwere obere "nkedo" na mpempe mgbakọ moto nke mmiri tube ... ma enweghị m ike ịhụ ebe m ga-esi tinye mgbede a n'ime mgbakọ moto. Enwere m iwepu mgbakọ mgbago site na kọlụm iji weghachite mmiri mmiri a.
A ga-anabata ndụmọdụ ọ bụla.
osụk site ttravis na Solomon, 09 / 04 / 2017 - 12: 20
Na zaghachi 1965 3hp Johnson by VintageRuns
Enweghị m ọrụ na 3 HP ...
Enweghị m ọrụ na 3 HP maka oge ka m wee ghara icheta otú ọ na-arụ ọrụ. Echere m na e nwere vidiyo vidio ndị dị n'ebe ahụ nwere ike igosi gị ihe ị na-achọ, ma ọ bụ ma eleghị anya, onye nwere ike isi na nso nso a nwere ike ịchọrọ ma zaa ajụjụ gị.
osụk site mdm on Fraị, 09 / 15 / 2017 - 15: 12
Ana m ewughachi 53 3hp Johnson. Ekwesịrị m iji ihe ọ bụla dị na bọtịnụ iji belata mbibi, dị ka griiz ma ọ bụ mkpọchi wdg. Otu ihe na nkwonkwo n'elu ogwe ala?
osụk site ttravis on Nọdụ, 09 / 16 / 2017 - 00: 03
Na zaghachi 3hp johnson by mdm
Ana m etinye mgbochi na ...
Mgbe mgbe, m na-etinye mgbochi na nsị, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ọla dị iche iche. Ị ga-ekele onwe gị oge ọzọ ị na-edozi bọtịnụ ahụ. Ezigbo, ma ihe dị mma. https://www.amazon.com/Permatex-80078-Anti-Seize-Lubricant-Bottle/dp/B0…
osụk site 19evinridelvr58 na òtù ezinụlọ, 10 / 04 / 2017 - 20: 24
M apolagize maka itinye nke a n'ihu ọha ma achọpụtara m na ọ dịghị kọntaktị anyị. Im tryin ibudata akwụkwọ ntuziaka ndị nwe akwụkwọ maka 1958 evinrude lightwin atọ mgbe m pịa ibudata ọ na-agwa m ka m pịa mgbakwunye mgbakwunye ntakịrị obere igbe gbapụta ọkụ ọkụ nke abụọ wee pụọ na enweghị m ike ịme ihe ọ bụla n'ihi enweghị m ike
T gara aga nke a ... na saịtị ahụ abụghị ezigbo onye ọrụ enyi .. ma ọlị
osụk site ttravis on Tọs, 10 / 05 / 2017 - 07: 58
Na zaghachi Tinye ndọtị by 19evinridelvr58
Daalụ maka ịga na m ...
Daalụ maka nleta na ana m anabata nkwupụta ndị na-egosi njirimara nke m nwere ike idozi na melite saịtị a. Emere m ka m tinye bọmbụ ọ bụla ụgbọ mmiri nke Evinrude / Johnson / OMC / BRP mere ma na-arụsi ọrụ ike na ndepụta nke akụkụ maka ọ bụla moto. Enwere ọtụtụ tweeks m chọrọ ime iji melite ahụmịhe onye ọrụ.
Ana m agbalị ịchọta ụdị peeji ị na-ahụ mgbe ị hụrụ nke a. Echeghị m na m nwere njikọ iji budata faịlụ PDF nke akwụkwọ ntuziaka ahụ. M gara http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou… ma amaghị m ihe ịpịrị.
Ọ ga-ekwe omume na ihe ịpịrị iji budata faịlụ bụ n'ezie mgbasa ozi google na nso n'elu ihuenyo ahụ? Nke a bụ nyocha ihuenyo nke mgbasa ozi m chere nwere ike ịme mgbagwoju anya. Enwere m ntakịrị ịchịkwa na agbakwunye na Google na-etinye aka, mana ha na-eme enyemaka ịkwụ ụgwọ maka saịtị a. M ga-ahụ ma m nwere ike igbochi mgbasa ozi ahụ n'ihi na ekwetara m, ọ na-eduhie.
Aga m ahụ ma ọ bụrụ na m nwere ike ịchọta PDF faịlụ ma tinye njikọ ya.
osụk site ttravis on Tọs, 10 / 05 / 2017 - 08: 10
Na zaghachi Daalụ maka ịga na m ... by ttravis
Ekwenyere m na egbochila m ...
Ekwenyere m na egbochila m mgbasa ozi ahụ. Nke a bụ mgbasa ozi mbụ m gbochie ka m wee mụta ihe ọhụrụ. M ga-ahụ ma m nwere ike ịchọta faịlụ PDF ahụ. O nwere ike ịbụ ebe a na-egbu ebe ochie http://old.outboard-boat-motor-repair.com